Samee Jaantusyada Qiimaha iyo Isbarbardhiga Sida Ninja | Martech Zone
Xalay waxaan ku dhisay shabakad qiimeyn ah oo ku jirta shey cusub oo aan bilaabi doonno marba marka ka dambeysa WordPress ku noqo boosteejo Email Suuq geyn ah, CircuPress. Wax madadaalo ah haba yaraatee ma ahayn in la dhiso (waan isticmaali jiray) Qiimaha bilaashka ah iyo shabakada isbarbardhiga ee DreamCode shaybaarka) walina waxay u baahan yihiin in wax laga beddelo si loo hubiyo inay ka jawaabayaan shaashadaha moobilada iyo kaniiniga.
Haddii aad raadineyso qaab aad u fudud oo aad ku dhisi karto miisaska isbarbardhiga iyo shabakadaha qiimeynta, hubi Isbarbar dhig Ninja iyo Qiimaha Ninja. Labada bixinba waxay la yimaadaan qaar ka mid ah tusaalooyinka caadiga ah ee kaa caawin doona inaad ku garaacdo dhismaha xoogaa shabagyo daqiiqado ah.
Kani waa adeeg la martigeliyay, markaa runti kama dhisi kartid shabakadda oo aad nuqul ka sameysatid / dhejisid koodhkaaga. Waxaad adeegsaneysaa gabal koodh ah oo aad ku dhajiso HTML-kaaga (ama miiska aqoonsiga oo lagu dhejiyay a Koodhadhka WordPress ee loo maro Plugin) si aad ugu muujiso shabakadaada barta aad u socoto.
Faa’iidada Isbarbar dhig Ninja iyo Qiimaha Ninja waa xawaaraha aad ku soo saari karto shabagyo qurxoon. Waa in la ogaadaa in ay jiraan xaddidaad waxa aad ku qaabeyn kartid adeegsigooda adeegsigooda. Ugu dambeyntiina, ma aanan isticmaalin adeegga maxaa yeelay waxaan u baahday inaan raaco midab midab leh oo u dhigma goobta. Iyo dabcan, haddii xawaaraha iyo xasilloonida ay fure u yihiin, waxay kuxirantahay goobta dhinac saddexaad ah si loo soo bandhigo waxyaabahaaga laga yaabo inay noqon karaan ama aadan noqon karin wax aad rabto inaad sameyso.
Tags: isbarbar dhig ninjaisbarbar dhigga shabakaddamiisaamanqiimaha ninjashabakadda qiimahamiiska qiimaha
Uma baahnid Shahaado Ganacsi si aad tan u fahanto